Madagascar National Parks: nihena hatrany amin’ny 43% ny faritra ala may | NewsMada
Madagascar National Parks: nihena hatrany amin’ny 43% ny faritra ala may
Tamin’ny alalan’ny paikady maro sy ny fampiasana teknolojia moderina, nahavita nampihena hatrany amin’ny 43% ny faritra ala may ny MNP tamin’ny taon-dasa (2019). Mitohy ny ezaka iarhana amin’ireo mpiara-miasa rehetra any anaty ala any.
Nanao tombana, omaly ny Madagascar National Parks amin’ny fiarovana ny valanjavaboahary tantanin’izy ireo. Nisongadina tamin’izany fa nahavita niaro ala mirefy 9.160 ha izy ireo, tamin’iny taona 2019 iny. Nihena hatrany amin’ny 43% ny ala may any anatin’ny faritra arovana raha oharina tamin’ny tranga niseho ny taona 2018.
Nahitana fihenana hatrany amin’ny 31% ihany koa tao anatin’izany ny fahamaizan’ny la tao Ankarafantsika.
Anisan’ny manimba ny faritra arovana ny doro ala izay ataon’ireo dahalo hamafana ny lalany. Anisan’ny lasibatra amin’izany ny ao Bemaraha, kalambatritra ary ny any Marotandrano. Eo koa ireo mpitrandraka harena an-kibon’ny tany izay manimba ny aty ala mihitsy toy ny mitranga any amin’ny valan’Ankarana.
Ankoatra ireo, misy koa ny fanaovana saribao, fanaovana tavy…
Asan’ny MNP ny fiarovana ny faritr’ala mitahiry ireo harena voajanahary. Mampiasa ny teknolojia moderina izy ireo amin’izany hahafantarana haingana ny loza mitranga amin’ireny faritra arovana ireny.
Efa mipetraka amin’ireo faritra arovana ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana hanamorana ny famonoana ny afo sy ny famonjena rehetra hatao. Ho an’Isalo, efa misy fitahirizan-drano hatrany amin’ny 5.000 litatra hanaovana vonjy voina raha sendra misy ny firehetana.
Miara-mientana amin’ireo ekipa rehetra miasa any anaty ala ihany koa ireo fitaovana efa napetraka hanafaingana ny vonjy voina.
Marihina fa nahatratra 229.970 ireo mpizahatany nitsidika an’i Madagasikara, tamin’ny taona 2019. Mandeha mitsidika ireo zavaboahary any anaty ala avokoa ny 65% amin’izy ireo. Niakatra 12% io tarehimarika io raha oharina ny tamin’ny taon-dasa.